Qaybinta Anaconda: Suite-ka ugu dhameystiran ee Sayniska Xogta leh Python | Laga soo bilaabo Linux
Luigys toro | | Aplicaciones, Barnaamijka
Maalmihii ugu dambeeyay waxaan baranayay oo aan si qoto dheer u tababaranayay Luqadda barnaamijka Python taas oo aan marar badan uga hadalnay barta, sababta ugu weyni waxay tahay waxaan hayaa fikrado dhowr ah oo aan doonayo inaan sheego oo loogu talagalay qalabaynta nidaamka Linux laakiin taasi waxay ku qiyaasi kartaa nidaamyada kale ee hawlgalka.
Dhammaan daraasaddan waxay i siisay fursad aan kula kulmo wax cusub qalab, xeelado, iyo xeerar waxtar weyn u leh barnaamijyada Python, sidaa darteed maalmaha soo socda waxay u badan tahay inaan la wadaagi doonno maqaallo dhowr ah oo la xiriira afkan barnaamijyada weyn ee xoogga badan.
Qaybinta Anaconda waa mid ka mid ah aaladaha aan u arko inay saldhig u tahay taxanahan maqaallada, maadaama aan tixgelinayo Suite-ka ugu dhameystiran ee Sayniska Xogta leh Python iyo inay na siiso tiro badan oo shaqeynaya oo noo oggolaan doonta inaan ku horumarinno codsiyada si wax ku ool ah, dhaqso badan oo fudud.
3 Sidee loo rakibaa Qaybinta Anaconda?
anaconda Waa a Furan Source Suiteama kaas oo daboolaya taxane ah codsiyo, maktabado iyo fikrado loogu talagalay horumarinta Sayniska Xogta ee loo yaqaan Python. Khadadka guud AQaybinta naconda waa qaybinta Python ee u shaqeysa sida maareeyaha deegaanka, maareeyaha xirmo oo leh uruurin in ka badan 720 xirmooyinka furan.
Qaybinta Anaconda waxaa loo qaybiyay 4 qaybood ama xalka farsamada, Anaconda Navigator, Mashruuca Anaconda, The maktabadaha sayniska xogta y Conda. Kuwaas oo dhan waxaa lagu rakibaa si otomaatig ah iyo nidaam aad u fudud.
Markii aan rakibno 'Anaconda' waxaan heli doonnaa dhammaan qalabkan horeyba loo qaabeeyey, waxaan ku maamuli karnaa iyada oo loo marayo isku-xirka adeegsadaha garaafka ee Navigator ama waxaan u isticmaali karnaa Conda maamul ahaan qunsulka. Waad rakibi kartaa, ka saari kartaa ama cusbooneysiin kartaa xirmo kasta oo Anaconda ah qasabno yar oo Navigator ah ama hal amar oo ka socda Conda.
Suite-kan loogu talagalay Sayniska Xogta ee loo yaqaan Python wuxuu leeyahay astaamo aad u tiro badan, kuwaas oo aan ku muujin karno waxyaabaha soo socda:
Bilaash, ilo furan, oo wata dukumentiyo faahfaahsan iyo bulsho weyn.
Multiplatform (Linux, macOS iyo Windows).
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad rakibto oo aad maamusho xirmooyinka, ku-tiirsanaanta iyo bay'adaha sayniska xogta leh Python qaab aad u fudud.
Ka caawi horumarinta mashaariicda sayniska xogta adoo adeegsanaya IDE-yada kala duwan sida Jupyter, JupyterLab, Spyder, iyo RStudio.
Waxay leedahay qalab sida Dask, numpy, pandas iyo Numba si ay u falanqeeyaan Xogta.
Waxay u oggolaaneysaa in lagu sawiro xogta Bokeh, Datashader, Holoviews ama Matplotlib.
Barnaamijyo badan oo kaladuwan oo laxiriira barashada mashiinka iyo qaababka barashada.
Anaconda Navigator waa qaab fudud oo GUI ah oo garaafka isticmaalaha ah laakiin leh awood aad u weyn.
Waad ku horumarin kartaa baakadaha la xiriira sayniska xogta Python-ka boosteejada.
Waxay bixisaa awood u leh helitaanka ilaha waxbarasho ee horumarsan.
Tirtir ku tiirsanaanta xirmada iyo arrimaha xakamaynta nooca.
Waxay ku qalabeysan tahay qalab kuu oggolaanaya inaad abuurto oo aad wadaagto dukumiintiyo ay ku jiraan lambarro leh iskudubarid toos ah, isleegyo, sharraxaad iyo fasiraad.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku soo uruuriso Python koodhka mashiinka si dhakhso leh loogu fuliyo.
Waxay fududeeysaa qorista algorithms isku dhafan oo isku dhafan oo fulinta howlaha ah.
Waxay leedahay taageero xisaabinta waxqabadka sare.
Mashaariicdu waa kuwo la qaadi karo, oo kuu oggolaanaya inaad la wadaagto mashaariicda kuwa kale isla markaana aad mashaariic ka fuliso goobo kala duwan.
Si dhakhso leh loo fududeeyo hirgelinta mashaariicda sayniska xogta.
Sidee loo rakibaa Qaybinta Anaconda?
Ku rakibidda 'Anaconda Distribution' waa fududahay, kaliya u tag Qaybta soo dejinta Qaybinta Anaconda oo soo dejiso nooca aad rabto (Python 3.6 ama Python 2.7). Marka la soo dejiyo, waxaan fureynaa terminal, u tag galka u dhigma oo aan ku fulino isku dayga rakibida ee leh nooca u dhigma.
Ku beddel magaca bash la soo dejiyey
Kadibna waa inaanu riixnaa enter in la sii wado, waxaan ku aqbalnaa rukhsadda yes, waxaan xaqiijineynaa galka halka aan ku rakibeyno Anaconda ugu dambeyntiina waan dooranay yes si Anaconda looga hormariyo Python-ka mashiinka.
Laga soo bilaabo terminal-ka waxaan ku wadnaa Naaciga Naadiga Anaconda anaconda-navigator oo waxaan bilaabi karnaa inaan ku raaxeysano aaladda sida ku muuqata sawirka soo socda.
Si la mid ah, waxaad isticmaali kartaa waxyaabaha soo socda Liiska amarka Conda taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad rakibto oo aad u maamusho xirmooyinka si aad u dhakhso badan.
Qalabkan Qalabka waxaa loogu talagalay Sayniska Xogta ee leh Python laakiin waxtar u leh inta badan soosaarayaasha Python, waxay leedahay tiro badan oo codsiyo iyo baakado noo ogolaanaya inaan si hufan u shaqeyno.
Qaar badan oo ka mid ah baakadaha iyo yutiilitida ee ku jira Qeybinta Anaconda ayaa si qoto dheer loogu qiimeyn doonaa maqaalo kala duwan oo aan soo daabici doonno, waxaan rajeynayaa in aaggan uu adiga dan kuu yahay oo ha ilaawin inaad nooga tagto faallooyinka fikradahaaga iyo faallooyinkaaga ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Qaybinta Anaconda: Suite-ka ugu dhameystiran ee Sayniska Xogta ee loo yaqaan Python
Windows-ka haa Anaconda, laakiin Linux waxaan marwalba ku arkaa inay fududahay in la rakibo meelaha lacagta dhigaalka ah, wuxuu ku dhexjiraa nidaamka, way fududahay in la rakibo. Ugu yaraan isticmaalka baandooyinka, nambar iyo buuga aasaasiga ah ee Jupyter Note ee aan ku siiyo wax dhibaato ah kalama kulmin
Jawaab Jorge Álvarez
Lizard aad u fiican!
Jawaab Edwin Enrique Vargas
Ma lagu talinayaa kuweenna bilaabaya Python?
Jawaab Thaizir El Troudi
Si aad ah loogu taliyay kuwa bilaaba python, waxaa jira aalad la yiraahdo noteyter notebook oo lagu rakibay Anaconda Distribution oo aan u maleynayo inay ku habboon tahay barashada iyo qorista Python… Waxaan dhawaan yeelan doonnaa maqaal ku saabsan qalabkan.
Waan sugi doonaa isaga.
hello ma maamuli karo anaconda-Navigator-ka terminal
Waxaan isku dhibanahay.
waa inaad tan ka horreysaa marka ugu horraysa ee ay furaan oo keliya:
$ isha ~ / .bashrc
Ka dibna hadday si caadi ah u furaan sida kor ka muuqata.
Jawaab Fabio Gaviria
Su'aal, maxay tahay kanaalka telegram-ka ee desdelinux ???
Tani waa su'aal aad u wanaagsan, wixii aan raadinayay waxba kamaan helin
Ku jawaab sadalsuud
Waqtigan xaadirka ah uma hayno arrin maamul, laakiin waxaan ka fiirsaneynaa inaan helno sida ugu dhakhsaha badan. Si ay bulshada u dhex gasho.
Waxaan ku rakibay Anaconda3 LinuxMint 18.2 Waxaan furaa basaas waxaanan ogaadaa inay ii oggoshahay oo kaliya inaan helo darawalkayga adag. Ma arkaysid USB-ga. Sideen u habayn karaa ikhtiyaarkan? Salaan wacan
Ku jawaab efueyo
Mashiinnada Virtual dijo
Cashar wanaagsan. Waxaan abuuray Lubuntu + Mashiinka Anaconda oo leh wax walba oo diyaar u ah inay socdaan.
Waan la wadaagayaa haddii ay waxtar leedahay: https://github.com/Virtual-Machines/Anaconda-VirtualBox
Kajawaab Mashiinnada Farsamada
Sida loo arko erayga sirta ah ee shabakadda Wi-Fi ee ku jirta Android